BASEBENZISE ILOCKDOWN UKUGQEKEZA IZIKOLE EMPANGENI – Sivubela intuthuko Newspaper
ISIKOLE SAMABANGA APHEZULU I HAWINI TECHNICAL ESIGQEKEZWE AMAHLANDLA AMAHLANU
IZIKOLE ezimbili ezingaphandle kwelokishi iNgwelezane enyakatho nesifundazwe iKwaZulu Natal seziphenduke inkundla yamasela njengoba zigqekezwa mihla namalanga kuthathwe izinsiza zesikole.
Isikole samabanga aphezulu iHawini Technical High Kanye neNqutshini Primary zigqekeziwe ngalesikhathi sokuvalwa kwasani ezweni ngenxa yobhubhane iCorona Virus ehlasele.
INkosi yesizwe sakwaMaDlebe okuyisigodi sayo lesi okwebiwe kuso izinsiza zabafundi uZenzo Zungu isikhiphe umklomelo kuloyo owonikeza ngolwazi oluzosiza ukuba kuboshwe abasolwa.
“Esikhathini saphambilini sike sabhekana nenkinga efana nalena kodwa ukukhipha umklomelo kwasiza ngoba sakwazi ukubamba abasolwa. Nakulokhu ngiyaphinda abeze phambili abanolwazi ,” kusho Zungu.
Esikoleni iHawini Technical sekugqekezwe cishe amahlandla amahlanu kusukela kuqale unyaka kwathathwa ukudla amajezi ebhola, amathuluzi okusebenza engadini Kanye nokunye okuningi. eNqutshini Primary khona kuthathwe amakhompyutha amabili neScreen.
Inkosi iphinde yakhala kakhulu ngokudembesela kwamaphoyisa Uma bebika njengoba engekho osaboshiwe mayelana namacala obugebengu kulendawo.
“Kuyakhathaza kakhulu lokhu okwenzeka la umphakathi uhleli lubhojozi kodwa Uma usuzithathela umthetho ngezandla uzoboshwa. Amaphoyisa akawenzi ngendlela umsebenzi noma ebabambile bayadedelwa abasolwa umphakathi uqhubeke uhlale kubuhlungu,” kusho Zungu.
Kubukeka lezigebengu zinesineke njengoba zingene ngesikhathi lapho uhulumeni ememezele ukuthi Abantu abahlale ezindlini ngenxa yokulwisana nokubhebhetheka kwegciwane iCorona Virus esibulale abantu abahlanu kwasala abangaphezulu kwenkulungwane bethelelekile.
USihlalo wesigungu esikoleni samabanga aphansi iNqutshini uSiyabonga Sibiya uthi lokhu kuyakhathaza kakhulu ngoba sekukaningi kukhuzwa lomhlola kodwa usaqhubeka.” Siphatheke kabuhlungu yilokhu okwenzekayo njengoba kuyizikole ezifunda izingane zethu esifuna zibe nekusasa eliqhakazile. Ukwebiwa kwempahla kuyasithinta kakhulu njengoba lento ilokhu uqhubekile,” kuphetha uSibiya.